नेपालमा लगाइएको चिनियाँ खोपबारे जान्नैपर्ने ६ कुरा « Khasokhas Follow @khasokhasmag
नेपालमा लगाइएको चिनियाँ खोपबारे जान्नैपर्ने ६ कुरा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ३, २०७८ सोमबार
नेपालमा सिनोफार्म समुह अन्तरगतको चिनियाँ खोप भेरोसेलको दोश्रो मात्रा लगाउन सुरु गरिएको छ । पहिलो डोज चैतको अन्तिम साताबाट वितरण सुरु गरिएको यो खोप चीनले अनुदानमा दिएको हो ।
यो भ्याक्सिन कति उमेरको व्यक्तिले लगाउन सक्छ ?
यो भ्याक्सिन १८ बर्षभन्दा माथिकाहरुलाई लगाउन अनुमति दिइएको छ । मे ६ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो भ्याक्सिनलाई प्रयोगको अनुमति दिएको हो ।
गर्भवती महिलाले यो भ्याक्सिन लगाउन हुन्छ ?
अरु कस्ले लगाउन सक्छ यो भ्याक्सिन ?
भ्याक्सिन कस्ले लगाउनु हुँदैन ?
यो भ्याक्सिन कति डोज लगाउनुपर्छ ?
के यो भ्याक्सिन सुरक्षित र प्रभावकारी छ ?
(विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट जारी जानकारीको खसोखासबाट अनौपचारिक अनुवाद)